Pelosi ayaa ku soo laabtay hadalkii ee Trump … "Taasi waa sababta aan u kala jeexay warqada" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Pelosi ayaa ku soo laabtay hadalkii ee Trump … “Taasi waa...
Pelosi ayaa ku soo laabtay hadalkii ee Trump … “Taasi waa sababta aan u kala jeexay warqada”
Afhayeenka Golaha Wakiiladda Nancy Pelosi, ayaa mar kale, ku soo laabatay dhacdadaas oo 12 maalmood ka hor ay soo jiidatay indhaha warbaahinta gudaha iyo tan caalamiga ah, iyada oo sharrax ka bixineysa sababta ay u jeexjeexday qoraalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waxay sheegtay wareysi ay siisay telefishanka “CNN” mar dambe inay qorshayn weyday inay duubto nuqulkeeda khudbadda Gobolka ee Ururka afaraad ee bisha Febraayo, laakiin markii ay aqrisay kadib waxay u aragtay “mid xun”, sida lagu sheegay sharraxaadkeeda, waxayna dooneysay inay soo jiidato dareenka warbaahinta ee diidmadiisa.
Waxay sidoo kale carrabka ku adkeysay: “Ulama jeedin hore in sidaas la yeelo, laakiin markii aan aqriyay sedex meelood oo khudbadda, waxaan arkay inay tahay wax xun, bog kasta oo la iska diido waa la diidaa.”
Intaa waxaa dheer, waxay u aaneeysay habdhaqankan dadaalkeeda ah inay soo jiidato dareenka saxaafadda, iyadoo leh, “Haddii aad rabto inaad soo jiidato dareenka saxaafadda, waa inaad soo jiitaan dareenkooda, marka waxaan u jeexjeexay warqaddii si ay u muujiso inaysan run ahayn.”
Xiiso badan kadib markii uu diiday inuu gacan qaado
Trump ayaa diiday inuu gacan qaado Pelosi, sababo la xiriira maxkamaddiisa horteeda, ka hor khudbaddiisa midowga, taasoo sababtay xanaaqa dambe.
Ficil muujinaya dareenka qoto dheer ee xiisadda u dhexeysa labada iska soo horjeedaa, ka dib markii Trump uu si ula kac ah u iska indho tiray inuu gacan qaado inta ay ku gudo jirto bixinta nuqulka rasmiga ah ee khudbadiisa, waxay markii dambe goysay waraaqaha.
Waxaa xusid mudan in kuxadinta hadalka Pelosi, ay la kulantay dhaleeceyn kaga timid xisbiga Jamhuuriga, kaasoo dhaleeceeyay Gudoomiyaha Golaha Wakiilada, iyadoo la tixgelinayo inay hoos u dhigtay ixtiraamka askarta Mareykanka ee lagu xusay, maadaama ay jabiyeen shuruucda iyo caadooyinka soo raaca sanado ka hor.
Trump ayaa faallo ka bixiyay hab dhaqankan maalmo kadib, isagoo sheegay in hurinta hadalka ay tahay mid sharci darro ah isla markaana ku xadgudbeysa shuruucda Mareykanka.
Markii laga hadlayo tijaabinta xil ka qaadista Trump, Pelosi wuxuu u sheegay CNN: “Trump wuxuu dhihi karaa waa la siidaayaa ka dib markii Guurtidu ka tuurtay labada eedaymood ee isaga ka dhan ah oo ku saabsan xil ka qaadistiisa, laakiin weligiis eedaysanaan doonaa.” Waxay sharraxday: “Ma jiri karo dambi la’aan haddii aysan jirin maxkamad, oo ma jiri karto maxkamad la’aan iyada oo aan la jirin markhaatiyaal iyo dukumiintiyo. Sidaa darteed, Trump wuxuu dhihi karaa wuxuu ku guuleystay patent, saxaafadda sidoo kale waxay sheegan kartaa inuu ku guuleystey patent, laakiin wuxuu weligiis eedaysanaan doonaa.”
Wasaaradda waxbarashada Somaliland oo Tartansiinaysa 31 Dugsi